Sheekada Orsay waxay umuuqataa sidii Saldhigga Tareenka ee Haydarpaşa | RayHaber | Wadada Tareenka | Wadada weyn | cable baabuur
HomeDUNIDAYURUB33 FaransiiskaSheekada Orsay waxay umuuqataa sidii Saldhigga Tareenka ee Haydarpaşa
Sheekada Orsay waxay umuuqataa sidii Saldhigga Tareenka ee Haydarpaşa
09 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 33 Faransiiska, YURUB, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline 0
sheekada orsayin waxay u egtahay haydarpasa garina
Sheekada Orsay waxay la mid tahay Xarunta tareenka ee Haydarpaşa: Waa dhismo aan faa iido lahayn oo lumisay muuqaalkii xaruntiisa ee 1939 maxaa yeelay kuma habboona tareennada dhaadheer. 1970, waxay ka fekerayaan inay dumiyaan dhismaha oo ay hudheel dhisaan. Markay reer Parisians diidaan, dawladdu waxay go’aansatay inay dhisme ka dhigto madxafka 1977. Waxaa laga furay 1986, matxafka Orsay 32 wuxuu martigaliyay in kabadan hal milyan oo booqdayaasha 93 sanad walba.
Wargeyska Wargeyskaoo ka yimid Melishan Devrim; Musee d'Orsay waa mid ka mid cinwaanada ugu booqashada badan Paris, ma ahan oo keliya marka loo eego ururinta, laakiin sidoo kale waa shaqo farshaxanimo. Markii Orsay Palace (Palais d'Orsay), oo la dhisay muddadii Napoleon, la gubay intii lagu jiray 1810 Paris Commune, dhisme weyn oo saldhig ayaa laga dhisay goobta qasriga. Furitaanka dhismaha saldhigga ayaa ku beegmay furitaanka Bandhigga Caalamiga ah ee Paris ee 1871, iyo goobta imaatinka ee martida ka timid dibedda waxay ahayd Saldhigga Paris Orsay. Dhismaha tareenka ee dhererkiisu yahay mitirka '1900 mitir' wuxuu ahaa dhismaha 'warshadaha' ee wakhtigaas marka la eego 175 kun oo tan oo bir ah, laakiin qaab dhismeedka biraha oo dhan wuxuu ku qarsoonaa gadaashiisa dhagax-qurxinta si uu ugu dhigmo Louvre. Xarunta 12, oo shaqeyneysey sanadka oo dhan, ayaa guntay hawshii ay ka dhalatay soo bandhigidda tareenada dhaadheer ee 40.
Faransiisku waxay si dhab ah u danaynayeen waxa ay ka qaban karaan dhaqanka iyo farshaxanka ay lahaayeen wixii ka dambeeyay Dagaalkii 2.World War. Markii ugu horreysay ee uu madaxweyne ka noqdo Charles de Gaulle, waxaa la asaasay Wasaaradda Dhaqanka. André Malraux, oo ah kii ugu horreeyay ee loo magacaabay wasaaradani, wuxuu ahaa taariikhyahan suugaaneed, gaar ahaan xiiseeya maadada cilmu-nafsiga. In kasta oo aysan jirin horumar muuqda oo lagu sameeyey muddadii Malraux, oo isagu ahaa wasiirkii ugu horreeyay ee dhaqanka ee u dhaxaysa 1959-1969, dadka reer Baasiiziya markasta waxay ahaayeen kuwa aad u xoog badan ilaalinta magaaladooda.
Saldhigga Orsay, oo aan loo adeegsan tan iyo 1939, wuxuu si toos ah uga soo horjeeday Louvre, oo ku taal bartamaha magaalada. Xukuumadda cusub, waxay ka careysiisay xaqiiqada ah in dhisme ku yaal bartamaha magaalada uu noqday mid aan kala go 'lahayn, wuxuu ogolaaday duminta dhismihii xaruntii 1970 wuxuuna ku beddelay hudheel casri ah. Jacques Duhamel, wasiirka dhaqanka kadib Malraux, oo hogaaminayay go'aankan, wuxuu ku faray siyaasada dhaqameed ee dowlada mid udub dhexaadka u ah. Waxay qaadatay siyaasad ah in dhaqanka dhaqammada laga tiro badan yahay lagu kala diro dhaqan qaran oo ay wadaagaan. Duhamel, oo ku guuleystey wareejinta miisaaniyaddii loo qoondeeyey maamullada maxalliga ah wasaaradiisa, ayaa lumiyay kursikiisii ​​1973 waxaana jiray isbeddel ku yimid siyaasadda dhaqanka ee Faransiiska, sidaas darteed wuxuu ka fogaanayaa burburka tareenka Orsay.
QIIMAYNTA MACLUUMAADKA MUUQAALKA
1977, waxaa la go'aamiyay in loo rogo dhismaha saldhigga xarun madxaf. 1975, Agaasinka Matxafka Faransiiska ayaa soo jeediyey talokan oo looga golleeyahay samaynta aaggan aagga madxafka, inta u dhaxaysa Louvre iyo Matxafka Qaranka ee Fanka casriga ah ee ku yaal Xarunta Georges Pompidou. 1978 waxaa la siiyay guddi rayid ah oo kormeeraya isbedelka dhismaha, kaas oo la siiyay maqaamka taarikhiga taariikhiga ah, matxafka, waxaana madxafka lagu caleemo saarey madaxweynaha waqtigaas François Mitterrand.
MUSEUM AS AUTOMOTIVE STVE INSTITUTION
Isbedelka siyaasad dhaqameedka Faransiiska ayaa si weyn wax ugu kordhisay dhaqaalaha qaranka. 1990 gudaheeda, matxafyada Louvre iyo Versailles Palace waxaa lagu dhawaaqay inay yihiin 'hay'ado dowladeed oo madax bannaan', matxafyadana waxaa loo oggolaaday inay abuuraan miisaaniyadooda u gaarka ah oo ay adeegsadaan dakhliyadahooda. 2000-yada, dhiirrigelinno kala duwan sida canshuur dhimis ayaa loo fidiyay hay'adaha gaarka loo leeyahay ee maalgeliya madxafyada qaranka. Intii lagu gudajiray wasaaradda taariikhyahannada farshaxanka Malraux, warshadaha dhaqanka, oo ku soo biiriyay kaliya 0.39 dhaqaalaha dalka, waxay gaareen xaddiga bilyan ee 1981 bilyan oo 2,6 iyo 1993 bilyan oo faranlaand ee 13,8. Maanta, xaddiga dakhliga dhaqamada Faransiiska ee ah 7,3 bilyan euro.
LACAG LA'AANTA MUSLIMIINKA LACAG LA'AANTA GAR ARAG
Intii lagu beddelay Saldhigga Tareenka Orsay ee madxafka, waxyaabaha ugu muhiimsan ee naqshadaha dhismaha ee noqday saxeexa dhismaha ayaa loo daayay sida ay ahaan jireen. Saqafka muraayadaha-daboolaya, hoolal waaweyn oo leh saqafyo dhaadheer, saacado munaasib ah oo ka dhex jira rugta iyo daaqadaha shaashadda leh ayaa loo beddelay matxaf iyagoon waxna ka lumin dhismihii qarnigii 19. Iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah in dhismuhu yahay qarnigii 19, matxafka afarta dabaq ah waxaa loo beddelay matxafka si uu u noqdo mid soojiidasho leh. Astaamaha 1848.yüzyıl waxaa laga helaa hoolka weyn ee saldhiga waxaana alaabada iyo sawirada mudada lagu muujiyey matxafka. Shaqooyinka ugu caansan ee soo jiidashada leh ayaa ku yaal dabaqa sare. Saacadaha dhagaxa ah ee daaqadaha Matxafka Orsay ayaa ah meelaha ugu wanaagsan ee dalxiisayaashu ay sawirro ka qaadan karaan.
Matxafka Orsay, oo soo maray labo sano oo dib-u-soo-celin ballaaran oo ah 2011, oo ku kacaya $ 27 milyan oo doolar, ayaa martigaliya in kabadan 3 milyan oo booqdeyaal ah sanad walba. Cusboonaysiinta ugu dambaysay, qaab ayaa lagu isticmaalay rinjiyeynta darbiyada midabada pastel iyadoo la waafajinayo sawirrada iyo muujinta midabada ku jira sawirrada. In kabadan hal milyan oo qof ayaa booqday matxafka tan iyo markii la furay 1986. Madxafka, oo ay kujiraan shaqooyinka ay leeyihiin kuwa ugu caansan Faransiiska sida Edouard Manet, Gustave Courbet, Vincent Van Gogh, Renoir iyo Rodin, ayaa sidoo kale marti galiya bandhigyo ku meel gaar ah si loo ballaariyo uruurinta. Matxafka gudahiisa waxaa ku yaal hoolka maqaayada iyo hoolka shineemada.
Hay'ad dowladeed oo madaxbannaan, aan u sheegno madxafyada Xarunta Xerada Tareenka ee Haydarpaşa marka laga hadlayo ka tagista madxafyada maaraynta khabiirada iyo keenista dhismayaasha qarnigii 19 dalka oo leh howlo cusub.
Haydarpaşa Garı Tarihi, Yapılış Hikayesi ve Haydar…
Midnimada Haydarpaşa usbuuca 300 ee Falalka…
Haydarpaşa Tareenka waxaa loo bedelayaa Saldhigga YHT Station
Sheekadii Hubka Xamuulka qaada ee Laysku Qaado Hubka Anatolia…
Sheekada Rakaabka Cusub ee loogu talagalay Cabdullaahi Han
Faragelinta Booliis ee teendhooyinka baabuurta xamuulka ee USB ee Sapanca